तपाइँ सोशल मिडियालाई कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ? | Martech Zone
सोमबार, फेब्रुअरी 21, 2011 आइतबार, अक्टोबर 4, 2015 Douglas Karr
तपाईं वास्तवमा भाग लिन जाँदै हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, त्यहाँ आजकाल प्रत्येक उद्योगमा सोशल मिडिया मोनिटर गर्ने थुप्रै कारणहरू छन्:
तपाईंको उद्योगको अनुगमनले तपाईंलाई र तपाईंको कर्मचारीहरूलाई विशेषज्ञता लिन मद्दत गर्दछ।
तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूको अनुगमनले तपाइँलाई प्रतिस्पर्धी बुद्धिको कम्पाइल गर्न र मद्दत गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ तपाइँको व्यवसाय वा उत्पादनलाई भिन्न बनाउन।
अनुगमनले तपाईंलाई नेता र साइटहरूको पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ तपाईंको उद्योगमा अधिकार र प्रभावका साथ।
अनुगमनले तपाईंलाई भाग लिन प्रासंगिक घटनाहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्दछ (भाग लिन वा बोल्न)।
अवश्य पनि, अनुगमनले तपाईंलाई भावनाको मूल्यांकन गर्न, ग्राहकको प्रशंसापत्र / उल्लेख पदोन्नति गर्न तपाईंको व्यवसायको उल्लेख फेला पार्न मद्दत गर्दछ।
निगरानीले तपाईंलाई सार्वजनिक सेवा समाधान गर्न ग्राहक सेवा पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ - वा तपाईंलाई तपाईंको उत्पादनहरू वा सेवा सुधार गर्न आवश्यक जानकारी प्रदान गर्दछ।
र निगरानीले कुराकानीमा मान थप्न अवसर प्रदान गर्दछ।
DK New Media हाम्रो ग्राहकहरुका लागि आफ्नै सामाजिक मिडिया निगरानी सेवा सुरू गरीरहेको छ हाम्रो विद्यमान सम्बन्धहरुमा एक मूल्य जोड को रूप मा। यदि तपाई यसलाई टेस्ट ड्राइभ दिन चाहानुहुन्छ भने कृपया मलाई खबर गर्नुहोस्। हामी प्रत्येक कम्पनी (log लगइनहरू) प्रति ग्राहक are 499 for को लागि सेवा प्रस्ताव गर्ने छौं जो हाम्रो ग्राहकहरू होइनन्।
मलाई हाम्रो १०,००० डलरको लागि विजेताहरू फेला पार्न समस्या आएको छ ... मानिसहरू वास्तवमै उनीहरूलाई जवाफ दिन ईमेलहरू पढ्न व्यस्त छन् जस्तो देखिन्छ! त्यसोभए - हामी हाम्रो उपकरणहरू लाई सुन्न कार्यहरू केहि फरक गर्न लाग्दछौं। Vontoo एक हो आवाज सन्देश सेवा यसले तपाईंलाई स्वचालित रूपमा रेकर्ड गर्न र रिमाइन्डरहरू पठाउन, ग्राहकहरू लाई सूचना संकलन सूचनाहरू अनुमति दिनेछ। पहिलो २ व्यक्तिहरू जसले यो सेवा उपयोगी फेला पार्न सक्दछन् एक पेशेवर आवाज मार्केटिंग खाता जित्ने छ !!! Vontoo को साथ यो ईमेललाई जवाफ दिनुहोस्! शीर्षकमा र हामीलाई भन्नुहोस् कि तपाईं कसरी अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुहुन्छ - हामी भौंटामा मानिसहरूलाई विजयी चयन गर्न दिन्छौं।